5 Nzira: Yakakura sei Dhata, AI uye ML Inogona Kuvandudza Chiitiko cheMutengi? - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
5 Nzira: Idhi Huru Dhata, AI uye ML inogona Kuvandudza Ruzivo rweVatengi?
Ruzivo rwevatengi rwave nhandare nyowani yehondo yebhizinesi. Nemabhizinesi uye vatengi vese vari kufamba online, makwikwi ave anotyisa. Vatengi vanokwanisa kuwana huwandu hweruzivo pamusoro pezvigadzirwa uye nevanotsiva. Mabhizinesi, kune rimwe divi, anokwanisa kuwana yakawanda yevatengi data kana zvirinani vane nzira dzekuunganidza chero ruzivo runodiwa. Nemhinduro dzakawandisa dzakawanda dzakafanana, vatengi vakaita ruzivo rwavo rwekutenga separamende yekusarudza pakutenga. Dambudziko pakutanga raive nzira dzakashomeka dzekuvandudza ruzivo rwevatengi nekuda kwekushaikwa kwezvigadzirwa zvekuongorora zvakaomarara. Big data, chakagadzirwa njere, uye machine learning vakavandudza zvakanyanya ruzivo rwevatengi nekubvumira mabhizinesi kuti aongorore data revatengi vavo. Aya matekinoroji auya kuzonunura bhizinesi kuti rivabatsire kukwidziridza danho revatengi ruzivo ravanopa. Hedzino nzira shanu dhata hombe, AI & ML inogona kubatsira kuvandudza ruzivo rwevatengi: Verenga Zvimwe: Sei Internet yezvinhu uye AI inogona kubatsira kuvandudza kugutsikana kwevatengi?
5 Nzira idzo Artificial Intelligence, Kudzidza Kwemuchina uye Big Data inogona kuvandudza ruzivo rwevatengi:
Vanoda kusvika makumi matanhatu muzana vevatariri vanobvuma kukosha kwedata hombe mukubudirira kwemabhizinesi avo, uye makumi manomwe kubva muzana vanoona data hombe rakakosha kuti varambe vachikwikwidza. (Chinhu)
1. Kuenzanisa zvirinani kwevatengi zvinodiwa uye zvigadzirwa:
Nekushandiswa kwe big data uye machine learning, makambani anokwanisa kupa zvigadzirwa nemasevhisi ayo vatengi vangangotenga. Kurudzira masisitimu vane basa rakakosha kuita mune izvi. Aya masisitimu anoshandisa machine learning uye data hombe kuratidza zvigadzirwa kune vatengi izvo zvavanogona kutenga. Nekuwanika kwedata rakakura revatengi senge yemutengo renji, zvaunofarira, kutenderera kutenderera, nezvimwewo zviri nyore kwazvo kuvanongedzera nezvipo chaizvo.
Nhasi vatengi havagone kuumba yakatsiga uye yakajeka sarudzo sezvo ivo vachishaya izere uye yakajeka kubata kwechigadzirwa ruzivo. Dzimwe nguva, ivo vanopihwa zvakare yakawandisa ruzivo kubata. Nekuda kweizvozvo, sarudzo yemutengi haina kugadziriswa asi inochinja nekuchinja kweruzivo mukutenga. Kurudziro masisitimu anobatsira kuunza yakazara uye yakasarudzika ruzivo kune vatengi. Izvi zvinoguma neshanduko mune zvinodiwa nevatengi. Nekushandiswa kweakakodzera ekurudziro masisitimu uye musika tswanda ongororo, makambani anogona kupa ruzivo maererano nerwendo rwevatengi. Izvi zvinogonesa kutaurirana kuri nani uye kwakapinza kunotungamira mukuwedzera mari uye kugutsikana kwevatengi.
2. Kusimbisa pane yakasarudzika ruzivo rwechokwadi:
Panguva yekutenga vatengi vanopa huremu hwakaenzana nehunhu hwechigadzirwa uye ruzivo rwavo rwekutenga. Vatengi havangotenge chete zvinhu zvezvinhu zvinodiwa asiwo nekuda kwavo kwekuda kwepamoyo. Nekudaro, ivo vanofarira mabrand anokwanisa kuenderana pakati pechinhu chinonzwisisika uye zvido zvezvepfungwa. Nekudzidza maitiro evatengi mumatanho akasiyana ekutenga kutenderera, guru data analytics yakagonesa makambani kushandura ruzivo rwevatengi rwavanopa.
Read More: Nei uchiyera maitiro ako emushandisi uchishandisa analytics yeapp?
Imwe nzira hombe dhata inobatsira mukuvandudza ruzivo rwevatengi ndeyekuongorora maitiro avo pane ino saiti. Kupa zvakanakisa zvevatengi ruzivo webhusaiti inofanirwa kupindura mibvunzo yevatengi munzira iyo vangangobvunzwa. Izvi zvinochengetedza nguva yevatengi mukutsvaga ruzivo nekutenga. Nokushandisa hunhu analytics makambani anogona kuongorora maitiro evatengi, kuona marwadzo avo uye kugadzirisa webhusaiti kuti ienderane nezvavanoda. Chiitiko chakatsetseka chaicho ndizvo zvese zvinoda kubatidza chishuwo uye kukurudzira kutenga.
3. Basa rekuvimbika uye ongororo:
Nemaonero echokwadi, pane yakakura mhando yemamwe mhinduro kuchinetso. Kuve wakanamatira mune ruzivo rwakawanda, vatengi vanosarudza kusarudza vatambi vane ongororo dzakanakisa. Ongororo dzave chiyero chakakosha kwazvo chekuvimbika. Kutendeseka kwakawana kukosha kwakakura zvekuti iko zvino kwobva kwave mukana wemutengo. Vatengi vanogona kubhadhara mutengo wakakwira kumakemikari ane mufananidzo uri nani pane kuisa njodzi pakutenga kubva kune dzimwe dzakaderera mhando.
Data hombe yakaita kuti kuongorora ruzivo rwevatengi kuve nyore. Nekuongorora dhata kubva kune akasiyana mapoinzi ekubata senge mbozha, mu-chitoro, dhesiki rekubatsira, evanhu vezvenhau, ongororo chikuva etc. vatengi vanogona kuziva nezve chero kusagutsikana kwevatengi uye kutora matanho ekugadzirisa pamberi pekupararira kweshoko. Semuyenzaniso, yemagariro midhiya manzwiro ongororo inogona kushandiswa kufanotaura manzwiro anounzwa muchinyorwa. Iyo inyanzvi huru yekuongorora data inogona kutora mapeji kubva evanhu vezvenhau mawebhusaiti uye kuronga zvinyorwa kuita zvakanaka, zvakaipa kana kwazvakarerekera. Bhizinesi rinogona kushandisa matekiniki akadaro kuti vanzwisise psychology yevatengi vavo uye kutora matanho ekuvandudza ongororo uye zviyero.
Read More: 5 Makwikwi Makomborero Ekushandisa Big Dhata muBhizinesi
4. Kukosha kwemunhu mukutaurirana:
Iko kune kudikanwa kwakawedzera kweakazvimirira ekutenga ruzivo. Vatengi nhasi vanogona kuona zvakajairika kushambadzira kuputika uye vane tsika yekuregeredza zvachose. Kuti uwane budiriro nekutaurirana kwekushambadzira, vashambadziri vanofanirwa kugadzirisa yavo meseji kusvika padanho rakakura.
Vanopfuura makumi masere neshanu muzana evashambadziri venhare vanotaura kubudirira nehunyanzvi - hukuru hwekuita, mari, shanduko. (mabviro - Wharton University)
Read More: Matanho manomwe: Maitiro Ekugadzira Yakabudirira Big Data Strategic?
Yakakura data inobatsira kuvandudza ruzivo rwevatengi nekuongorora data revatengi uye kufungidzira zvavanoda nezvishuwo. Big data uye chakagadzirwa njere vaunza akawanda matsva maitiro ehukama senge geofencing uye kuvimbika zvirongwa patafura. Iine geofencing, izvozvi zvave kugona kupa nzvimbo-yakavakirwa kushambadzira mameseji. Kuvimbika zvirongwa zvinovavarira kupa mubairo kuvimbika kwemutengi uye -kutenderera inowedzera kukurudzira kwevatengi. Ose mapurogiramu anovavarira kugadzirisa ruzivo rwevatengi nechiratidzo.
5.Muchina wakanyengerwa sekutaurirana kwevanhu:
Iko kudiwa kwerimwe ruzivo nekushomeka kwekuedza kunogarodiwa nevanhu. Munguva ino yeruzivo kuwandisa vatengi vanoda mhinduro dzakananga kumatambudziko avo. Nehurombo, ivo vanofanirwa kupfuura nemurwi muhombe wezvinyorwa kuti vawane mhinduro kumatambudziko avo. Nedatha yakawanda zvisina basa vatengi vanoda kudiwa kwekubatsirwa nevanhu kugadzirisa matambudziko avo. Yakakura data, machine learning & chakagadzirwa njere dzakapa kukwira kune mutsva mutengi chiitiko chinosimudzira kureva chatbots.
Read More: 5 Makomborero eChatbots muBhizinesi
Chatbots ndiwo mapurogiramu akazvimirira anogona kukurudzira kukurukurirana kwevanhu. Aya bots anoshandisa kugadzirisa mutauro mutauro kuti unzwisise kutaurirana kwevanhu mune chaiyo mamiriro uye nekupa mhinduro kumibvunzo. Nenzira iyi makambani anokwanisa kugadzirisa vatengi mibvunzo muzhinji uye kudzikisira kudiwa kwekuedza kwevanhu kwekugadzirisa kutaurirana. Chatbots inogona kubatsira kuvandudza ruzivo rwevatengi nekudzora iyo yekumirira nguva uye nekupa pane-kudiwa kwekuwana rutsigiro.
Iko kugona kweaya matekinoroji hakuna nzira inogumira pane zvataurwa pamusoro zvataurwa. Kubva optimization yemutengo kune mushure mekutengesa sevhisi, data hombe rinogona kuvandudza kushanda kwebhizinesi mune ese matunhu. Kwete chete kushambadzira asi aya matekinoroji anogona zvakare kushandiswa mukati kugadzira, kugadzirwa, zvishandiso nezvimwewo Kusakanganwa kuti zvese izvi hunyanzvi matekinoroji achiri kuchinja. Nekufamba kwenguva kugona kwavo kuchavandudzawo. Kana iwe uchida kushandisa chakagadzirwa njere, machine learning, uye data hombe kune rako bhizinesi saka inzwa wakasununguka kuti utaure nesu: